Onye ezi omume na ndị jisiri Chineke aka ike na-ala n’iyi (1, 2)
E kwuru otú ndị Izrel si na-agba akwụna (3-13)
A ga-akasi ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha obi (14-21)
Ndị ajọ omume yiri oké osimiri nke na-enweghị ike ịdajụ (20)
Udo agaghị adịrị ndị ajọ omume (21)
57 Onye ezi omume alaala n’iyi,Ma, o nweghị onye ọ na-emetụ n’obi. Ndị jisiri Chineke aka ike na-anwụ.+ Ma, o nweghị onye na-aghọta na ihe mere onye ezi omume ji nwụọBụ ka ọdachi ghara ịdakwasị ya.* 2 Ọ na-anọ n’udo. Ndị niile na-anaghị ahapụ ụzọ ha kwesịrị iso na-ezuru ike n’ili.* 3 “Ma ununwa, bụ́ ụmụ nke nwaanyị na-akọ ọdịnihuNa ụmụ nke nwoke na-akwa iko na nwaanyị akwụna,Bịanụ nso: 4 Ònye ka unu ji eme ihe ọchị? Ònye ka unu na-akwa emo? Ònyekwa ka unu na-akparị? Ọ̀ bụ na unu abụghị ụmụ na-emebi iwuNa ụmụ na-aghọ aghụghọ,+ 5 Ndị mmekọahụ na-agụsi ike n’ebe osisi ukwu dị iche iche dị,+Nakwa n’okpuru nnukwu osisi ọ bụla na-ama pokopoko,+Ndị na-egbu ụmụaka na ndagwurugwu dị iche iche,+N’ebe ndị gbawara agbawa ná nnukwu nkume? 6 Ị họọrọ nkume na-akwọ mụrụmụrụ ndị si na ndagwurugwu. Ọ bụ ha bụ òkè gị.+ Ọ bụkwa ha ka ị na-achụrụ àjà mmanya, na-enyekwa onyinye.+ Ihe ndị a hà ga-eme ka obi dị mụ mma?* 7 I dowere àkwà* gị n’elu ugwu dị oké elu.+ Ị gakwara ịchụ àjà ebe ahụ.+ 8 I dowere ihe a ga-eji na-echeta gị n’azụ ibo ụzọ nakwa n’awara ụzọ. Ị hapụrụ m, gbara ọtọ. Ị gara ebe ahụ mee ka àkwà* gị saa mbara. Gị na ndị gị na ha na-eme enyi gbara ndụ. Ọ na-atọgbukwa gị atọgbu ka gị na ha dinaa.+ Ị nọkwa na-ele ihe ha ji bụrụ nwoke.* 9 I ji mmanụ gakwuru Melek.* I jikwa nnukwu sent gakwuru ya. I zigakwara ndị ozi gị ebe dị anya,Si otú ahụ weda onwe gị ala ruo n’ili.* 10 Ọtụtụ ebe i tinyere isi emeela ka ị rụgbuo onwe gị n’ọrụ. Ma, ị sịghị, ‘Ọ baghị uru ọ bụla!’ I nwetaghachiri ike. Ọ bụ ya mere na ị naghị ada mbà.* 11 Ònye ka ụjọ ya bịara gị,Nke mere i ji malite ịgha ụgha?+ I chetaghị m.+ Ọ dịghị ihe i chebaara echiche.+ Ihe i ji ghara ịtụ m egwu bụ maka naM gbachiri nkịtị ma leghara ihe i mere anya.*+ 12 M ga-akọsa ihe ị sị na ọ bụ ezi omume+ ị na-eme na ọrụ niile ị na-arụ.+ Ha agaghịkwa abara gị uru.+ 13 I tie mkpu ka e nyere gị aka,Arụsị dị iche iche i kpokọtara agaghị anapụta gị.+ Ifufe ga-ebufu ha niile. Ume nkịtị mmadụ kupụrụ ga-eburu ha. Ma, onye ji m mere ebe mgbaba ga-eketa ala a,Nwetakwa ugwu nsọ m.+ 14 A ga-asịkwa, ‘Rụọnụ ụzọ, rụọnụ ụzọ! Rụọnụ ya ka ọ dị mma.+ Wepụnụ ihe ọ bụla nọchiiri ndị m ụzọ.’” 15 Onye Dị Elu na Onye Ukwu,Onye na-adị ndụ* ruo mgbe ebighị ebi,+ onye aha ya dị nsọ,+ kwuru, sị: “Ebi m ebe dị elu na ebe dị nsọ,+Ma, mụ na ndị obi gbawara na ndị dara mbà n’obi nọkwa,Iji gbaa ndị dara mbà n’obi ume,Meekwa ka obi sie ndị obi gbawara ike.+ 16 N’ihi na agaghị m na-alụso ha ọgụ ruo mgbe ebighị ebi. Agaghịkwa m na-ewe iwe mgbe niile.+ M ga-eme ka ike gwụ ndị mmadụ.+ M ga-emekwa ka ike gwụ ihe dị iche iche na-eku ume m kere. 17 Iwe were m n’ihi otú uru e ji aghụghọ erite si agụsi ya ike.+ Ọ bụ ya mere m ji taa ya ahụhụ, zoo ihu m, na-ewekwara ya iwe. Ma, ọ nọ na-enupụ isi,+ na-eme ihe ọ bụla obi ya gwara ya. 18 Ahụla m otú o si eme. Ma, m ga-agwọ ya,+ duziekwa ya.+ M ga-akasikwa ya na ndị so ya na-eru uju obi.”+ 19 Jehova kwuru, sị: “M ga-eme ka ha na-eto m. Udo ga-adịrị onye nọ ebe dị anya na onye nọ nso mgbe niile.+ M ga-agwọkwa ha.” 20 “Ma ndị ajọ omume yiri oké osimiri nke na-amali elu, nke na-enweghị ike ịdajụ,Nke mmiri ya na-abọlitekwa apịtị na ahịhịa ndị dị na ya. 21 Udo agaghị adịrị ndị ajọ omume.”+ Ọ bụ Chineke m kwuru ihe a.
^ O nwere ike ịbụ, “na-aghọta na ọ bụ ọdachi gburu onye ezi omume.”
^ Na Hibru, “n’àkwà ha.”
^ Ma ọ bụ “hà ga-akasi m obi?”
^ O nwere ike ịbụ otú e si ekpere arụsị.
^ O nwere ike ịbụ, “eze.”
^ Na Hibru, “ike anaghị agwụ gị.”
^ Ma ọ bụ “ma zochie ihe i mere.”
^ Ma ọ bụ “Onye na-ebi.”